Mr. Kunyarara, The Most Innovative Pool Heat Pump pa Interbad 2018 - Aquark Electric Co., Ltd
Mr. Kunyarara, The Most Innovative Pool Heat Pump pa Interbad 2018
Inguva yedu vokutanga kupinda Interbad muna Stuttgart, Germany. Ndinokutendai zvose nokuda nekutora nguva yenyu kushanyira dumba yedu. Iguru mukana uye kuchinjana pfungwa uye zvakaitika pamusoro inverter dziva kupisa pombi pamwe makasitoma yose. Tiri chaizvo nokuda kwavo nehanya kwedu nedzimwe rakanyorwa magadzirirwo inverter - Mr. Kunyarara.
Mr. Kunyarara ndiyo nzira itsva dziva kupisa pombi iri yose kuratidza. Rave zvakanaka kuzivikanwa vatengi vanobva kunyika dzakasiyana-siyana panguva dzinoratidza. Zvinorayirwa Several anotsigirwa pamusoro iyo zvikuru zvakatikurudzira gwapa,.
Nei Mr. Kunyarara chinonyanya itsva chigadzirwa?
Nemhaka yedu maindasitiri vagadziri. Zviri chikwata vaneshungu vanoda kusika kukosha kuti vatengi vedu uye vatengi. Simple klassiske kubata controller, chivanze noushamwari sandara pamusoro magadzirirwo ... Zvose anoshanda chete chikonzero chimwe: kuti mutengi ruzivo zvakanakisisa. Mushure kuramba Optimization uye kuedza itsva, ichi chigadzirwa kupfuura nzira itsva yakanga pakupedzisira azvarwa, izvo vakabudirira akachinja pfungwa tsika inverter dziva kupisa pombi.
Uyezve, isu vakabudirira ngadzirambe chete naye muGermany panguva dzinoratidza. Izvi zvinoreva dealers omunharaunda uye dziva varidzi vezvitoro vanogona kutenga Mr. Kunyarara zvakananga Germany! Kana uchifarira Mr. Kunyarara asi kugona kusangana nesu Interbad, wana yedu inotevera inoratidza, Piscine Global Europe 2018 muna Lyon, France. Vazotaura nesu chiso nechiso, uchadzidza zvakawanda pamusoro Mr. Kunyarara uye yedu inverter mhuri.
Ngativerengei kubata INVERTER mukana pamwe, ona iwe paitererwa 5D126 muna Lyon!
Post nguva: Oct-31-2018